ဆော်ဒီ ခရီးသွားလုပ်ငန်း တိုးတက်ရေး လုပ်ဆောင်ရန် ပေါင် ၅.၃ သန်းဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှုကို ရော်နယ်ဒို ဘာကြောင့် ပယ်ချခဲ့သလဲ? – Play Maker Sports Journal
ဆော်ဒီ ခရီးသွားလုပ်ငန်း တိုးတက်ရေး လုပ်ဆောင်ရန် ပေါင် ၅.၃ သန်းဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှုကို ရော်နယ်ဒို ဘာကြောင့် ပယ်ချခဲ့သလဲ?
January 24, 2021 playmaker Sports News 0
ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုဟာ ဆော်ဒီရဲ့နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်လုပ် တစ်နှစ်ပေါင်၅.၃သန်းဖြင့်မြင့်မားတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုရရှိခဲ့ပေမယ့်ပယ်ချခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
ေဆာ္ဒီ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ ေပါင္ ၅.၃ သန္းျဖင့္ ကမ္းလွမ္းမႈကို ေရာ္နယ္ဒို ဘာေၾကာင့္ ပယ္ခ်ခဲ့သလဲ?
ခရစၥတီယာႏိုေရာ္နယ္ဒိုဟာ ေဆာ္ဒီရဲ႕ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္လုပ္ တစ္ႏွစ္ေပါင္၅.၃သန္းျဖင့္ျမင့္မားတဲ့ကမ္းလွမ္းမႈရရွိခဲ့ေပမယ့္ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။
ဆာလာရဲ့စာချုပ်အခြေအနေက လီဗာပူးအပေါ် ထိခိုက်မှုမရှိဟု ကလော့ပ်ပြောကြား
ဂျီနိုအာနှင့်ပွဲစဉ်တွင် ဂျူဗင်တပ် နောက်ခံလူဒီလက် ပြန်လည်ပါဝင်မည်